Roulette Paradox: itinye ihe ndozi nke Parrondo na roulette
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụtakwu ihe Ihe mgbagwoju anya nke Parrondo, ị ga-amarịrị na na Disemba 23, 1999, akwụkwọ akụkọ sayensị Britain ama ama Nature, bipụtara edemede nke masịrị ndị ọkà mmụta ihe banyere ndụ, ndị ọkà mmụta mgbakọ na mwepụ, ndị ọrụ nlezianya na ndị ọnụ ọgụgụ site n'akụkụ ụwa niile.
Onye ode akwukwo bu onye injinia Australia, Derek Abbott, onye gosiputara ihe a na-akpọ Parrondo paradox.
Prọfesọ. Juan Manuel Rodriguez Parrondo bụ ọkà mmụta sayensị si na Mahadum Madrid, bụ onye gosipụtara etu ị ga - esi merie mgbakọ na mwepụ site na isonye na egwuregwu abụọ ịgba chaa chaa na-ezighi ezi (nke ọ bụla n'ime nke nwere ike itinye anyị na mwepu).
The Spanish physicist chepụtara ngwa a nke echiche ya na egwuregwu asọmpi iji gosipụta usoro nke nyocha ya banyere njem nke protein na sel, na ụfọdụ ihe dị iche iche nke Brownian motion nke ụmụ irighiri mmiri ma ọ bụ gas na nsogbu ụfọdụ nke thermodynamics.
Nsogbu nke Parrondo na-akọwa egwuregwu ịgba chaa chaa abụọ dabere na ịtụba ego abụọ.
Isi ma ọ bụ ọdụ, ma ọ bụrụ na mkpụrụ ego anaghị edozi (yabụ ọ bụrụ na egwuregwu ahụ ziri ezi), ihe gbasara nke puru inweta bụ 50%.
Na egwuregwu Parrondo A, mkpụrụ ego (nke anyị ga-akpọ mkpụrụ ego X) anaghị edozi: na nkezi ọ na-apụta isi naanị 495 ugboro site na 1.000.
Yabụ igwu egwuregwu A, anyị ga-atụfu n'ikpeazụ. Na egwuregwu B anyị ka nzọ na isi, ma anyị na-eji mkpụrụ ego 2 (nke anyị na-ekenye aha Y na Z).
Mkpụrụ ego Z dị oke ọghọm: ọ na-enye ndị isi oge 50 n'ime 1.000 (otu oge n'ime 20); Mkpụrụ ego Y, n'aka nke ọzọ, na-amasị anyị, na-ewepụta isi ugboro 700 n'ime 1.000.
Iwu ọzọ nke egwuregwu B bụ na anyị na-eji mkpụrụ ego Z naanị ma ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ mkpụrụ ego na akpa anyị n'ụzọ doro anya nkewa site na 3. Ọ bụrụ na ọnweghị nọmba nke atọ a, anyị na-eji mkpụrụ ego Y naanị.
Ọbụna na egwuregwu B na ogologo oge ị ga-atụfu, n'eziokwu ihe puru omume nke mmeri bụ 1/3 (pasent nke oge anyị na-eji mkpụrụ ego Z) mụbaa 0,05 (ya bụ otu nke iri abụọ) nke na-enye 0,01666 ... gbakwunyere 2/3 0,7 nke ruru 0,46666.
Na nchikota nke puru omume 2 bu 0,48333 ma obu: ihe na-erughi 50%.
Anyị kwubiri na anyị achọghị igwu egwuregwu A ma ọ bụ egwuregwu B.
Ngosipụta nke Parrondo dị ịtụnanya, n'ihi na ọ bụrụ na anyị egwu egwuregwu A ugboro abụọ na egwuregwu B ugboro abụọ wee gaa n'ihu otu a, ma ọ bụ na anyị na-ahọpụtaghị mgbe ụfọdụ A na mgbe ụfọdụ B, kama ịlafu, anyị na-emeri. Ogologo oge anyị ga-egwu, ka anyị na-emeri!
Prọfesọ Parrondo gosipụtara nkwubi okwu a site na iji usoro ntụgharị asụsụ mgbakọ na mwepụ nke na-abụghị ikpe ịkọwa ugbu a.
O mekwara uzo di iche iche nke 50.000 na kọmputa, na-akwado ihe a di egwu, nke yiri ka o na-emegiderita uche anyi.
Ọnọdụ nke egwuregwu abụọ ahụ nke ndapụta nke ihe dị iche na Parrondo kọwara bụ nke yiri nke harpoon nke igwe na-agba gburugburu na-atụgharị, nke ụmụ irighiri gas nke kụrụ na ya.
Harpoon bụ ụkwụ nwere ezé nke nwere ezé nwere mmasị dị ka nke nke ikwo, nke nwere ike ịtụgharị naanị n'otu ụzọ abụọ ahụ, ya bụ, ọ bụghị n'akụkụ ọzọ, n'ihi na enwere ụbọ akwara nke na-arapara n'ime oghere dị n'etiti ezé abụọ na mgbochi wiilị ahụ (ọ bụ 'a' mmewere na ọnụ ọgụgụ dị n'okpuru ebe a).
Otú ọ dị, na ntụziaka kwere, harpoon na-amịgharị n'elu elu ezé ma ghara igbochi ntụgharị.
O doro anya na ụdị dị otú ahụ nwere ike ịnara ike site na ụmụ irighiri gas nke na-aga aghara aghara na ụzọ ziri ezi ma bụrụ onye na-enweghị nchekasị nye ndị na-aga n'akụkụ ọzọ.
Na ileba anya na mbu, ọ nwere ike iyi na ngwaọrụ a nwere ike imebi ụkpụrụ nke abụọ nke Thermodynamics, n'ihi na ọ ga-adọta ike site na gas na otu okpomọkụ, na-enweghị nrigbu site na ọkụ na oyi.
O doro anya na nke a abụghị ikpe, ọ gaghị ekwe omume imebi ụkpụrụ nke abụọ nke Thermodynamics na echiche aghụghọ nke Parrondo, amụrụ iji kọwaa usoro mgbagwoju anya nke okike, ga-aba uru naanị maka ndị na-agba mbọ ịghọta ha.
Ngwa na roulette
Ọtụtụ afọ agafeela kemgbe izipụtara ozizi a na-adọrọ mmasị, na-akpali mmasị nke agụmakwụkwọ na ndị sayensị niile.
Kemgbe ọtụtụ afọ, e nweela ọtụtụ mbọ iji tinye ya na tebụl na-acha akwụkwọ ndụ, mana ọ dịkarịa ala m maara na ọ nweghị onye nwere ihe ịga nke ọma ugbu a.
N'ihi na ihe mgbagwoju anya na-emeri
Mgbe m na-enyocha usoro ihe atụ, enwere m ike ịchọpụta na ọ na-aga nke ọma dị ka egwuregwu ABBAB matrix na-eme 'dilutes' oge egwuregwu nke mkpụrụ ego Z (nke na-apụta ugboro 50 na 1.000) naanị ego zuru oke ( Mkpụrụ ego Y + 70%) nwere ike imeri ọnụọgụ karịrị ọnụ ọgụgụ nfu nke mkpụrụ ego X (mmeri 49,5%) na Z (5%).
Na omume, na naanị egwuregwu B nke ihe dị iche na Parrondo, mkpụrụ ego Z na-egwu naanị mgbe ego ahụ na-ekewa 3, ya mere eji ya 1/3 nke oge, ma ọ bụ ihe dịka 33,33%.
Agbanyeghị, site na itinye egwuregwu A na onodu, ọ bụrụ na atụmatụ a ga-agbaso maka ịhọrọ mkpụrụ ego iji (nke site ugbu a gaa n'ihu anyị ga-akpọ 'matrik') bụ mgbe niile ABBAB, a ga-egwu 40% nke oge (enwere Usoro 2 A n'ime 5 na matrik ahụ), ya mere na mkpụrụ ego Z sitere na 33,33% ugboro ugboro na egwuregwu B naanị, na-adaba na 1/3 nke 60% fọdụrụnụ, ma ọ bụ 20% na egwuregwu ụwa, yabụ naanị iji nye mkpụrụ ego Y (+ 70%) iji nwee ike imeri ọghọm nke mkpụrụ ego abụọ ọzọ.
Na isi, Egwuregwu A, ọ bụ ezie na ọghọm n'onwe ya, na-eme dị ka nsogbu (mkpọtụ) na akụrụngwa kachasị njọ (mkpụrụ ego Z) nke egwuregwu B.
N'ihi na ihe mgbagwoju anya anaghị emeri
Nsogbu doro anya nke roulette bụ na ọ dịghị mkpụrụ ego (nzọ) nke nwere ihe gbasara 70% nke sortie na na, ọ bụrụ na mmeri / ọnwụ, naanị gụọ 1 nkeji dị ka ezigbo mkpụrụ ego.
Ọ bụkwa eziokwu na ọ bụrụ na mkpụrụ ego a dịrị maka roulette, ọ ga-ezuru ya igwu ya ozugbo na, dịka ị pụrụ iche n'echiche, ederede m niile agaghị enwe isi.
Usoro izizi nke ihe dị iche, egosiputala nke ọma na ọ ga-aga nke ọma, ya bụ, ọ bụ ihe puru imebi nke a, na-eche na mkpụrụ ego Y dị adị n'ezie, ọ ga-enweta mgbakọ na mwepụ karịa uru ụlọ.
Ebumnuche anyị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwa itinye ya na roulette, ga-abụrịrị ịmegharị ya n'ụzọ 'kwesiri ntụkwasị obi', na-ahapụ ọrụ nke iweghachite ụgwọ nke ngwa ọrụ anyị iji mepụta mkpụrụ ego Y (+ 70%) iji megharịa .
Tupu ịmalite ịbanye n'ihe okike ahụ, agbanyeghị, anyị ga-enwerịrị ihe dị ezigbo mkpa, ya bụ ịghọta etu sistemu anyị si enweta pasent, iji mụta ihe mkpụrụ ya bụ, eziokwu ga-enyere anyị aka ikpebi ihe dị mkpa nke egwuregwu anyị, ma ọ bụ ...
N'ọgbọ egwuregwu, ekwenyela na Stopwin abaghị uru, ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na usoro enwee mmeri, ọ na-emeri mgbe niile, ya mere Stopwin enweghị uche ọ bụla karịa ibelata egwuregwu ahụ n'ụzọ na-enweghị isi na otu ahụ metụtara ma ọ bụrụ na usoro ahụ efunahụ. The Stopwin, dịka m ghọtara ya, bụ isi.
Malite na eziokwu na n'oge a ka enweghị usoro mmeri nke mgbakọ na mwepụ na roulette, Stopwin ghọrọ mkpebi mgbe ejiri ya mata.
M na-agụkarị na ntanetị dị iche iche n'ịntanetị, ihe ndị egwuregwu na-ekwu na ha na-etinye Stopwin nke 3/4/5/10 nkeji kwa oge na usoro ha, mana na-ekwupụtaghị ihe kpatara ha ji họrọ ọnụọgụ nke otu.
Ikekwe anyị na-echekarị na site na mmeri 5 nkeji ụbọchị nke euro 10, na njedebe nke ọnwa ha na-eme euro 1.500, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgwọ ọrụ, mana na nke a, ekwenyere m na ọtụtụ ndị egwuregwu ahụ, Stopwin anaghị eme uche, ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụhaala na ọ bụrụ na ọ bụ ọnụọgụ nke mmadụ.
The Stopwin, iji nwee uru bara uru, ga-ebu ụzọ gụpụta ya ma enwere ike ịme nke a site na ịnwapụta priori ihe mkpụrụ nke usoro anyị na-aga itinye na tebụl na-acha akwụkwọ ndụ.
Ihe Nlereanya: ọ bụrụ na ekpebiri m ịtọlite ​​egwuregwu m n'ụzọ ọ ga - eweta 10% na nkezi ma ekpebie igwu egwu 100 kwa oge, na - egwu naanị 70, enwere m nkeji iri na aka, nke ọma, ma e wezụga inwe obi ụtọ , Anakọtara m nkeji 10 na-abụghị nke m, n'ihi na sistem m, inwe mkpụrụ a na-atụ anya ya nke 3%, site na 10 strok egwuru egwu mere ka m merie naanị 70 ma ọ bụghị 7.
Mgbe m rutere ihe mgbaru ọsọ m (nkeji 10 na 100 gbaa) na 30 gbaa n'isi ụtụtụ, m na-akwụsị, m na-etinye Stopwin, dị ka enyere mkpụrụ nke egwuregwu m na-etinye, na 30 fọdụrụ gbaa m yikarịrị ka m ga-anọgide na ntuli aka ma ọ bụ njọ karịa ida, mgbe n'inwe onwe m ụtụ isi na-enweghị ihe ọ bụla ezi uche dị na ya.
Ebumnuche ọzọ gbara ọkpụrụkpụ maka itinye Stopwin bụ ihe jikọrọ ya na ihe m gosipụtara n'ụzọ doro anya afọ ole na ole gara aga site na nkedo PC, ebe m chọpụtara na Marigny De Grilleau hiere ụzọ, Gịnị kpatara permannọgide adighi ma ọ bụ ka mma:
na roulette, a na-enyocha mpempe akwụkwọ naanị na-ezo aka na generator nke mepụtara ha na usoro nkwụsị nke a na-egbochighị.
Ya mere, ọ bụrụ na roulette dị n’elu emeela ka m merie karịa usoro iwu, m na-etinye Stopwin na nke a apụtaghị na anaghịzi m egwu ụbọchị ahụ, mana n’ụbọchị ahụ, anaghịzi m egwu egwuregwu ahụ.
Enweghị uru nke Stopwin bụ ụgha kachasị na onye ọkpụkpọ ahụ gwara onwe ya ka ọ zere ịkwụsị ịgba egwu, ọ bụ onyinye ọzọ anyị na-enye onye na-ere ahia, n'ihi na ọ bụrụ na wiil enweela ihu ọma anyị, site na ịkwụsị ịkwụsị anyị na-ekwe ka ọ weghachite ihe mkpofu ( ọdịiche) nke ọ mepụtara ka ọ masị anyị.
Iji gosipụta ihe mkpụrụ (roi%) nke ihe dị iche na Parrondo bụ, emepụtara m ihe nkedo nke na-ewepụtakwa usoro mkpụrụ ego 3 na ekele nke m nwere ike nyochaa usoro ihe omume dị na ntọala nke echiche a, yana dị ka o doro anya na-agbalị nakwa ndị ọzọ mgbe niile na-emeri variants, ekele dị iche iche ga-ekwe omume mixes (matriks) nke egwuregwu A na B.
Na Paradox Simulator, na mgbakwunye na matrik ahụ egwuregwu, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ọghọm nke mkpụrụ ego 3 ahụ, yabụ, na-enweghị ajọ mbunobi maka atụmatụ ABBAB ahụ (matriks), ọ ga-ekwe omume ịnwale iji dochie pasent nke mkpụrụ ego mbụ, yana pasent kwekọrọ na nke ịkụ nzọ enwere ike ịme na tebụl roulette.
Tupu ịme nke a, iji chọpụta roi% nke ihe a na-eme na Parrondo, anyị ga-achọpụta nke ọma ihe ga-abụ mkpụrụ ego 3 anyị, nke maka ịdị mfe anyị ga-anọgide na-akpọ X, Y, na Z.
Mkpụrụ ego atọ ahụ
Malite na sortie pasent nke mkpụrụ ego 3 ejiri na Parrondo paradox, ka anyị gbalịa ịghọta ihe Roulette nwere ike ịnye anyị.
Gbakọ percentages a ga-abanye na Simulator dị mfe: naanị kewaa ohere anyị chọrọ ịtụle site na 37; dịka ọmụmaatụ, ohere dị mfe mejupụtara nọmba 18, ya mere 18/37 = 0,4865 yabụ na mmemme anyị ga-etinye uru 486 ahụ.
Dịka m kwuworo, mkpụrụ ego X nke na ihe mgbagwoju anya na-enweta 49,5% nke oge maka anyị nwere ike bụrụ ohere dị mfe, nke meriri 48,65% nke oge (ọ dịghị mkpa ịkewaa pasent na ntụpọ).
Mkpụrụ ego mbụ a zuru oke, n'ihi na n'eziokwu ọ na-enweta mmeri ma ọ bụ tụfuo otu otu, dịka ezigbo mkpụrụ ego.
Mkpụrụ ego Y, nke na - emegide 70% nke oge bụ ikike anyị na - akpata, ọ bụ ya na - enweta uru, ọ bụkwa na ọ dị nwute, na - adịghị adị ozugbo, anyị ga - eji ihe ngosi megharịa.
Cheta na iji mụta nwa ya, anyị ga-anwa, dịka o kwere mee, iji mezie ọnọdụ nke ezigbo mkpụrụ ego; ị nwere ike ịnụ ụtọ dị ka ị hụrụ na ọ dị mma, na nnwale m ewere m dị mfe 2 okwu martingale, dị ka nke a merie 1 nkeji na ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ nke 73,63% na mgbe m meriri m nweta 1 unit (zuru oke!), Ma mgbe m tufuru dị mwute , M tụfuru 3 nkeji kama naanị otu (ọdachi!).
Ndị a furu efu ga-abụ ihe nke nnwale mgbake anyị, ọrụ enyere na mkpụrụ ego Z (anyị ga-ahụ obere oge).
Mkpụrụ ego Z, nke na-emegiderịta onwe ya nwere oge nke 5%, enwere ike mepụtagharị nke ọma site na ịkụ nzọ ịnyịnya (nkewa), nke na ntụgharị ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma nke sortie nke 5,41%, dabara na pacenti nke paradox. ma nke a mgbe mkpụrụ ego na-enweta mmeri, n'adịghị ka nke ihe mgbagwoju anya, ọ naghị emeri naanị 1 nkeji, mana ọ na-enweta ọtụtụ dị 17 (magburu onwe ya!).
Ka anyị kwụsịtụ nwa obere oge tupu ịga n’ihu; ugbu a, anyị achọpụtawo kpọmkwem sortie percentages nke anyị 3 ọhụrụ ego nke na-:
Mkpụrụ ego X - 48,65% - ohere dị mfe;
Mkpụrụ ego Y - 73,63% - 2-martingale;
Mkpụrụ ego Z - 5,41% - ịnyịnya (gbawara).
N'oge a anyị nwere ihe niile iji mepụta, n'ihi Paradox Simulator, ego ole mkpụrụ ego 3 anyị ga-emeri ma ọ bụrụ na mkpụrụ ego Y furu efu naanị 1 nkeji karịa 3 ma ọ bụrụ na mkpụrụ ego Z meriri naanị otu nkeji karịa 17.
Kpebisie ike na mkpụrụ (roi%)
Ọ bụrụ na m banye na pasent atọ na Simulator, nke ahụ bụ 486 maka mkpụrụ ego X, 736 maka Y na 54 maka Z ma na-agba otu nde nnwale, ọ ga-apụta na sistemu a nwere roi% nke ihe dịka 3,5%.
N'oge a, ebe m chọpụtala mkpụrụ ego 3 ahụ, m ga-ahazi onwe m iji jikwaa ịkụ nzọ iji gbalịa iweghachite nkeji 2 nke mkpụrụ ego Y tụfuru karịa ezigbo mkpụrụ ego, dị ka a ga - asị na m ga - eme nke ọma na ọrụ a, na ọkara / na ogologo oge m nwere ike ijide n'aka na m meriri 3,5% ma ọ bụ ihe dịka 3 na ọkara nkeji ọ bụla 100 strok na-egwuri egwu, n'ezie a na-akwụ ụgwọ ahụ!
Ka anyị gaa n'ihu: n'ikpeazụ anyị nwere mkpụrụ ego 3 ma anyị maara nke ọma na usoro (matrik) ịtọ nzo:
Egwuregwu A - Mkpụrụ ego X (otu ohere dị mfe)
Egwuregwu B - Mkpụrụ ego Y (martingale nke okwu 2 na nkwụsị na nke mbụ meriri) ma ọ bụ Mkpụrụ ego Z (nkewa) naanị ma ọ bụrụ na ego ahụ bụ 3
Site na agba nke isii gaa n'ihu, ọ na-amalite ọzọ site na nke mbụ 1 na ihe ndị ọzọ.
M na-egwu enweghị usoro ma merie!
Kedu otu esi ahọrọ ohere ịkụ nzọ? Ekpebiri m ịhọrọ ha aghara aghara, m ga-akọwakwa ihe kpatara ya ozugbo.
Mgbakọ na mwepụ kemgbe ọtụtụ narị afọ dọrọ ogbenye ọkpụkpọ na echiche ndị dị ka 'na roulette ọ bụla ọrịa strok bụ a ọhụrụ ọrịa strok' ma ọ bụ 'roulette enweghị ncheta' ọma, ebe ọ bụ na m kwenyere n'echiche a, na mmemme ọhụrụ m kere iji jikwaa ego ahụ na nzo (Aga m ekwu okwu banyere ya obere oge), etinyere m generator na nke ọ bụla na-egosi m ihe m ga-akụ dabere na ụdị mkpụrụ ego m ga-egwu iji soro matrix ABBAB.
Akụkụ a nke enweghị egwuregwu dị m mkpa dị ka ihe ọ bụla ọzọ, n'ihi na mgbe m nọdụrụ ala na tebụl, enweghị m echiche banyere iberibe ihe ahụ kpọmkwem roulette mepụtara n'oge gara aga.
N'ezie, ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ekpebiri m igwu mkpụrụ ego X na-acha uhie uhie mgbe niile na roulette ụbọchị gara aga tụfuru kpamkpam na-acha uhie uhie, enwere m ike ịta ahụhụ na-adịghị mma nke oji, ebe ọ bụ na ọ bụ eziokwu na ya mere enwere m ike imeri, yabụ enweghị ike ịkọ ihe kpatara ya ọ bụla shot bụ ọhụrụ shot, mgbe ahụ, m na-enyefe akara m n'aka onye na-eweta usoro ihe omume ahụ, iji nwee usoro 100% dabere na pasent nke ihe ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụghị na ndị gara aga, nke m maara na-abụkarị isi iyi nke mmeri maka ọkpụkpọ.
Yabụ, na nkenke:
ma ọ bụrụ na m ga-egwu mkpụrụ ego X: M na-egwu a dị mfe ohere na aghara;
ọ bụrụ na m ga-egwu mkpụrụ ego Y: na agba nke mbụ m na-egwu 1 nkeji na ohere ọ bụla dị mfe (ọ bụrụ na m merie nkwụsị), ọ bụrụ na m tufuo, m na-egwu nkeji 2 na ohere ọzọ na-adịchaghị ka nke ahụ agba nke mbụ, na ole% nke mmeri anyị anaghị agbanwe agbanwe ma ọ bụrụ na anyị gbanwee ohere n'ihi na ọ na-arụtụ aka n ’ohere ịkọ nkọ nọmba 18 n’ime 37 na nkeji abụọ;
ma ọ bụrụ na m ga-egwu mkpụrụ ego Z: ịnyịnya (gbawara) na aghara site na ndị niile dị na egwu egwu.
Jikwaa ego (Ego Management)
Ugbu a anyị abịarutela n’isi okwu dị ezigbo mkpa: njikwa nke ndekọ ego na njikwa mgbake.
Anyị na-echetara gị na, ekele maka simulator ahụ, anyị enyochala na ọ bụrụ na mkpụrụ ego Y anaghị efunahụ nkeji 3 ma ọ bụrụ na mkpụrụ ego Z enweghị mmeri 17, ọ ga-enwe mkpụrụ nke 3,5% (ka anyị ghara ichefu uru a); Otú ọ dị, iji jiri ikwesị ntụkwasị obi na-etinye atụmatụ aghụghọ ahụ na iji nye ya ohere igosi n'ụzọ ziri ezi nzọ a ga-eme, anyị kwesịrị ịmepụta dummy ikpe, nke anyị ga-akpọ Paradox ikpe.
A ga-eji igbe a ghọta ihe omume dị iche iche nyefere ma nye anyị ohere ịtụle ihe dị mkpa n'oge mwakpo anyị.
Paradox Chest, ya mere, a ga-atụle ya dị ka a ga - asị na mkpụrụ ego / mkpụrụ ego ọ bụla na - emepụta + 1 ma ọ bụ -1 si otú a ewepu ma akụkụ ndị ọzọ furu efu na mkpụrụ ego Y, yana ndị ọzọ meriri site na mkpụrụ ego Z.
Ego a, ọ bụrụ na a gụọ ya n'ụzọ a, na-asọpụrụ atụmatụ dị iche iche n'ụzọ zuru oke ma yabụ nwee ike merie mgbakọ na mwepụ na ogologo oge.
Nke abụọ Oche ego anyị kwesịrị, ọ bụ na kama ezigbo, ebe anyị ga-aza ajụjụ maka ego ole anyị nwere n’akpa anyị ma e jiri ya tụnyere spins na-egwuri egwu (ezigbo roi%).
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọkà okwu nke atọ, nke anyị ga-akpọ Igbe mgbake na nke ihe mgbakwunye mgbakwunye niile nke ego Y na efu na ndị meriri site na mkpụrụ ego Z ga-agbakọta.
Ya mere ọ bụrụ na m merie ogbugba na:
Mkpụrụ ego X: + 1 akara na Royal Igbe na + 1 na Paradox Chest;
Mkpụrụ ego Y (ma m meriri na nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ nke martingale): + 1 akara na Royal Bank na + 1 na Paradox Bank;
Mkpụrụ ego Z: + 17 na Royal Igbe na + 1 na Paradox Chest na +16 na Igbe Iweghachite.
Kama nke ahụ, ọ bụrụ na enwere m nke:
Mkpụrụ ego X: -1 akara na Royal Bank na -1 na Paradox Bank;
Mkpụrụ ego Y (ọ bụrụ na m tụfuru agba nke abụọ nke martingale): akara -3 na Cassa Reale, -1 na Cassa Paradox na -2 na Cassa Recovery;
Mkpụrụ ego Z: -1 akara na Royal Bank na -1 na Paradox Bank.
Gini kpatara na Iweghachite ego ma ọ bụrụ na m merie mkpụrụ ego Z +16 kama + 17?
Ana m eme ya n'ihi na otu nke 17 meriri na-aga na mkpụrụ ego Z, dị ka a ga - asị na ọ bụ ezigbo mkpụrụ ego, 16 fọdụrụnụ bụ 'njupụta' m; cheta mgbe niile na a ghaghi ijikwa ihe mkpuchi Paradox dị ka a ga - asị na eji egwuregwu ahụ ezi ego atọ, nke na - enye + 1 / -1 naanị.
Ya mere, ọ bụrụ na n'oge egwuregwu m ga-egwu mkpụrụ ego Z (kewaa) nke a ka m na-eme ya naanị ma ọ bụrụ na Cash Recovery bụ ihe ọjọọ; na ntụle, ọ bụrụ na ndị Cash Recovery bụ efu, mkpụrụ ego Z adịghị mkpa iji naghachi ihe ọ bụla, gịnị mere ịta onwe gị ji a nzọ na 5,41%?
Na nke a, m na-egwu mkpụrụ ego m kachasị mma, nke bụ ohere dị mfe karịa ịnyịnya.
Otú ọ dị, n'oge a, ọ bụrụ na mgbe ọ bụla a na-egwu mkpụrụ ego Z, ihe nkwụghachi ahụ dị na efu ma m na-egwu ohere dị mfe, mkpụrụ% nke sistemụ ahụ abụghị ihe karịrị 3,5%, n'eziokwu na-eji Simulator na dochie anya Z mkpụrụ ego uru 54 (ịnyịnya) na 486 (ohere dị mfe) ga-enwe na mkpụrụ sitere na 3,5% na-arị elu ruo ihe dịka 18%, uru ga-amata anyị RMP (kacha ekwe omume mkpụrụ).
Ego Iweghachite nwekwara ike ịdaba na Royal Bank, n'ụzọ dị a ,aa?
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mgbe 10 kụrụ ya, ọ gara nke ọma (na-echeta mgbe niile na mkpụrụ ego Y na-aga na 73,65% ihe gbasara nke puru omume) yana Royal Bank enwere m ihe atụ mpaghara 4, mpaghara 4 ndị a buru ibu dị ka Roi% ma e jiri ya tụnyere mkpụrụ egwuri egwu (40% ) na ebe ọ bụ na mkpụrụ kacha dị elu anyị kwenyesiri ike ịbụ 18% (ka anyị kwuo 20% iji mechie), enwere m nkeji 2 na-abụghị nke m, nke mere m ji 'kwaga' nyocha site na Real Cash to the Recovery, ikwe ka m otu ihe n'ezie: igbu oge na mgbake site na otu okwu ya na ịnyịnya, n'ihi na mgbe mkpụrụ ego Y tụfuru nkeji 3, mmadụ abụọ na-aga Cassa Recovery ga-etinye obi gị dum site na njupụta ndị gara aga, na-enye m ohere igwu mkpụrụ ego Z ọzọ na ohere dị mfe karịa iji ịnyịnya.
A pụkwara ikwu otu ihe ahụ na nke Cash Recovery dị ka ihe atụ dị na -8 ma m merie nzọ ahụ na ịnyịnya; nke 17 nkeji merie 1 na-aga na Paradox Box (amanyere bụ iwu) na nke fọdụrụ 16 weta itule nke Iweghachite Igbe site -8 ka +8, nke pụtara na maka 4 spins efu na mkpụrụ ego Y (cheta na mkpụrụ ego a na-eweta -2 nkeji maka ọnwụ ọ bụla), aga m enwe ike izere ịmalite ịnyịnya ahụ.
N'ikpeazụ, na-atụle nke kacha nta tụrụ anya na Roi (3,5%) na nke kachasị nwere ike (18%), ekwenyere m na ọ dabara adaba na ngụkọta niile metụtara ịnye nkeji nke Royal Bank na nke Iweghachite, mana karịa ihe niile na Stopwin, kwesịrị calibrated na uru nke 10%, ma ọ bụrụ na m nwere a 10% roi na spins akpọ, M na-akwụsị (Kwụsịnụ) ma bido oge ozo (ikpochapu ihe niile) na roulette ozo.
Ọ dị mma, n'ezie m ga-enwe ihe ị ga-agbakwunye, ma ọ bụrụ na n'ọdịnihu, mmadụ ga-ajụ gị maka ozi na Parrondo Paradox nke a na-etinye na Roulette, ị maara ebe ị ga-eduzi ya.
Chetakwa na nke ahụ m gosipụtara ebe a bụ naanị otu n’ime ọtụtụ ụdị dị iche iche enwere ike ịmepụta yana na, ekele maka simulator ahụ, ị ​​nwere ike ịnwale onwe gị; N'ikpeazụ, m ga-achọ ịkọwa, ma ọ bụrụ na ọ gbaara mmadụ ọsọ, na na omume a na-egwu ya n’elu obula!
Site na ngwanrọ roulette a anyị na-emechi mkparịta ụka nke isiokwu a na-akpali mmasị, ma ọ bụ Parrondo Paradox a ma ama.
Ihe m na-egosi gị ugbu a bụ na nchịkọta akụkọ nyocha (ego management) dabere na nke a mgbakọ na mwepụ nsogbu, nke m Otú ọ dị, m mere ụfọdụ obere mgbanwe na m ga-egosi ihe ọzọ mgbe e mesịrị.
Gaminglọ egwuregwu egwuregwu ọhụụ nke Roulette Paradox
Dịka m kwuchara, emeela m ụfọdụ mgbanwe na usoro izizi, ebe m nwere olile anya na ọ bụ ihe doro anya nye onye ọ bụla, nsogbu dị na ịlọghachi Parrondo paradox maka roulette bụ naanị na enweghị ike inwe mkpụrụ ego nke meriri ihe dịka 70% nke oge na naanị otu 1 meriri ma ọ bụ tụfuo, dị ka ezigbo mkpụrụ ego na-eme mgbe ị na-egwu isi ma ọ bụ ọdụ.
Iji merie nsogbu a, naanị otu ụzọ bụ ịmepụta mkpụrụ ego efu (ohere) nke nwere pasent nke sortie ahụ, mana nke na-efu na-ebute ụzọ mgbake iji weghachite ngalaba ahụ furu efu na ndekọ ego na mgbakwunye na a Ochie otu.
Ego anyị 'rigged' na atụmatụ a bụ ego Y mgbe niile, belụsọ na echere m na m ga-eji mkpokọta enweghị nkọwa karịa nke akọwara n'elu, nke mere na-eme ka usoro mgbake dị mkpa na-agaghị ekwe omume belata.
Achọpụtala m mkpụrụ ego a na ịkụ nzọ nwere otu ogbugba 2 otu iri na abuo.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere mkpụrụ ego efu mgbe ọ meriri (64,86% nke oge ahụ), ọ na-achịkọta otu otu (nke a zuru oke) na mgbe ọ tụfuru ọ na-eme ka ọ dị mkpa iji weghachite naanị 1 nkeji (n'eziokwu, 2 na-efu , ma 1 bụ ihe ga-efunahụ ego igwe kpochapụla, yabụ naanị otu mpaghara chọrọ ka eweghachite).
Maka mkpụrụ ego 2 ndị ọzọ ọnọdụ ahụ pere mpe, anyị ga-achọ maka ohere dị mfe na enweghị mmasị na mmasị anyị.
Anyị na-etinye na Paradox Simulator pasent nke sortie nke mkpụrụ ego atọ a, nke ahụ bụ:
Mkpụrụ ego X: 486 / 1.000 (ohere dị mfe);
Mkpụrụ ego Y: 648 / 1.000 (2 iri na abụọ ma ọ bụ 2 ogidi);
Mkpụrụ ego Z: 486 / 1.000 (ohere dị mfe).
Ya mere, ịmegharị ihe mgbagwoju anya maka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ntụgharị, anyị ga-ebu ụzọ nyochaa datum dị oke mkpa: mkpụrụ nke sistemụ na-enweghị arịa, nke bụ ihe dịka. 10%.
Ogologo oge m enyochala nhọrọ nke ọnọdụ a, n'ihi na dịka ị nwere ike ịhụ site na eserese gara aga, mkpụrụ amamịghe nke + 10% na-eme ka anyị dị iche na 'oke' ọdịiche, nke kachasị egbu egbu ozugbo ụtụ isi, n'ihi na ọ dị elu ọ bụ ọdịiche na-adịghị mma (nke dịkwa na egwuregwu nwere ezigbo EV) yana nnukwu nrụgide mmụọ anyị ga-ebu n'egwuregwu egwuregwu na-adịghị mma.
O zuru ezu ikwu na usoro mmeri nke mgbakọ na mwepụ na Roi + 1% ma ọ bụ + 2%, nwere ike ịgafe usoro ego na-adịghị mma nke ọtụtụ narị narị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku hits tupu ịlaghachi na nke ọma, anyị niile nwere ike iguzogide nrụgide mmụọ dị otú ahụ?
Iji Roulette Paradox
Ojiji nke usoro ihe omume a dị mfe, anyị na-amalite site na ịkụ nzọ otu na ohere dị mfe egosiri na igbe dị n'okpuru (BET ON BLACK in the figure) na imelite igbe ego, site na ịpị bọtịnụ n'akụkụ ma ọ bụrụ na ị merie (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ego) ma ọ bụ ọnwụ (uhie uhie).
N'oge a, pịa pịa mkpụrụ ego na-esote (Y / Z) dabere na otu n'ime ha abụọ ga-arụ ọrụ na akpaghị aka ma yabụ tụọ ohere nke onye na-eweta ihe ngwanrọ ahụ na-egosi.
Dị ka otu, ị ga-akụrịrị ọnụego egosiri na igbe edo edo na ala aka ekpe (Bet Units), maka mkpụrụ ego X / Z nke a ga-ahazi otu 1 (ọbụlagodi), maka mkpụrụ ego Y (iri na abụọ) ya Ọ ga-adị mkpa ịkụ nzọ ego egosiri na otu iri na abuo, yabụ ọ bụrụ na ‘3’ pụtara n’igbe edo edo, a ghaghị ịkụ nzọ ha 3 nkeji nke iri na abụọ mbụ na nkeji iri na abụọ nke iri na abụọ, ma ọ bụ ndị ihe omume ahụ ga-egosi.
Ozugbo ị ruru mkpụrụ ego ikpeazụ n'aka nri (nke ise), ị ga-amalite site na mkpụrụ ego mbụ X na na.
Testsme ule ụfọdụ na ezigbo ọnụnọ ị ga-ahụ na net, ị ga-ahụ na Paradox Cash ga-enweta akara mgbe niile + 1 ma ọ bụ -1, dịka nke Parrondo si kwuo, ebe General Cash na nke Oge ahụ na-aga n'ihu (Ugbu a Attack) ma ọ bụrụ na ee efunari na mkpụrụ ego Y, ha ga-n'ezie akara -2 nkeji (ma ọ bụrụ na nzọ bụ 1 unit kwa iri na abuo).
Dika onye obula nwere ike inyocha ekele nke Simulator, sistemụ etinyere n'ụzọ dị otu a na - eweta roi na - echeghị eche + 10% na nke a bụ mgbakọ na mwepụ, Paradox Cash na ọkara / ogologo okwu 'ga-ekwe omume' itinye aka na uru a, mana ọ bụghị onye maara ụdị anwansi, mana naanị n'ihi na mgbe ọ funahụrụ ya na mkpụrụ ego Y ọ ga - akara --1 kama -2.
Ebumnuche anyị ga-abụ ịmegharị usoro iji weghachite nkeji ndị furu efu na mkpụrụ ego Y.
Ihe kachasị mfe ga-abụ igwu egwu iri na abụọ, yana nzọ na-arịwanye elu 2/1 / 3/9/27… nkeji kwa iri na abuo, mana mgbe ahụ anyị ga-akụda ego n'ime nkeji ole na ole na nke a abụghị n'ezie ihe mgbaru ọsọ anyị.
Ya mere echere m ichebe mgbake n'ụzọ dị otú a: nke mbụ ma ọ bụrụ na mkpụrụ amamịghe nke Parrondo paradox na-eji mkpụrụ ego 3 a eme ihe bụ 10%, n'eziokwu anyị ga-anwa ịdọpụ ihe dị ka ọkara site na ụlọ akụ, ma ọ bụ karịa karịa ezigbo 5% nke Roi na Real cash, nke bụrịrị azụmahịa.
Ọ bụrụ na n'otu oge a, mkpụrụ ego X / Z hụrụ anyị n'anya n'ihe banyere mmeri na-emeri ma e jiri ya tụnyere ndị akpọrọ, nkeji ndị a ga-eme ka ịrị elu nke nzọ ahụ belata.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mgbe 20 spins m nwere +4 nkeji na ego, ọ pụtara na m nwere 3 ọzọ nkeji tụnyere 5% na gbaa egwuri egwu (n'ezie na m ga-na +1), ọma, ma ọ bụrụ na a na-efu m ntụgharị na mkpụrụ ego Y (nke na-enweta ihe dịka ugboro 2 n'ime 3), ngwanrọ anaghị ebuli osisi ozugbo maka mgbake, kama ọ na-anọgide na osisi 1 ruo mgbe Roi nke ezigbo onye na-azụ ego mechara daa n'okpuru 5%.
Nke a pụtara na na ihe atụ dị n’elu, m nwere ike ịkwagide ọnụọgụ 2 ọzọ na Y na-enweghị mkpa ibuli nzọ ahụ.
Thezọ nke abụọ iji mee ka osisi dị ala mejupụtara n'eziokwu bụ na a na-etinye usoro mgbake naanị na mkpụrụ ego Y, nke a na-enyere aka n'ihi na mmeri mmeri a na-atụ anya na ọrịa ọ bụla bụ ihe dị ka 65%, nke dị elu karịa nke ohere ndị ọzọ egwuru. / Z ego (48,6%) na n'ihi ya na-adịghị mma n'ụzọ ga-erughị ogologo, ọbụna ma ọ bụrụ na ọnwụ na nke a bụ okpukpu abụọ, ma ị nwere ike ghara inwe ihe niile!
Nwere nzọ ahụ Roulette Paradox
Akụkụ nke atọ nke njigide nke nzọ ahụ bụ n'eziokwu na inwe mkpụrụ ego Y nke puru omume nke 65%, nke ahụ bụ ị nweta mmeri na nkezi 2 n'ime 3 hits, sọftụwia ahụ ga-anwale mgbake ọ bụghị n'otu ogbugba, na-amanye anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ martingale okpukpu atọ, kama ọ bụ mgbe niile na ọrịa strok abụọ nke a gbanyere na njedebe, nsonaazụ nke enwetara site na ịkewaa mgbake site na 2 n'oge ọ bụla.
Kedu ka esi agbakọ mgbake ahụ? Ọ bụghị naanị ọnụọgụ nkeji nke mkpụrụ ego Y furu efu, mana ọ bụ ihe dịka 50% nke ọdịiche dị n'etiti Paradox na Real Cache.
N'ezie, ọ bụrụ na n'oge ụfọdụ na nnọkọ ahụ Paradox Cashier (nke m na-echetara gị na ị ga-edekọ 10% uru na strok egwuru) dị na + 6 na Real Cashier nọ kama -4 n'ihi nkeji furu efu na Y Mkpụrụ ego, a ga-eweghachite ahụ site na iji 2 kee ọdịiche dị n'etiti + 6 na -4, ma ọ bụ nkeji 10, yabụ oke dị n'okwu a ga-abụ nkeji 5 kwa otu iri na abụọ.
N'ihe banyere mmeri nke ogbugba ahụ (nke anyị na-echeta na ọ nwere ihe ịga nke ọma nke 65%), nguzo ọhụụ ga-abụ + 7 maka Paradox Cashier na + 1 maka Ezigbo ya, yabụ nzọ nkwụghachi ọhụụ ga-ahazi nkeji 3 kwa iri na abuo.
N'ihe banyere ọnwụ, n'aka nke ọzọ, Royal Bank ga-aga -14 na Paradox na + 5, yabụ nzọ na-esote na mkpụrụ ego Y ga-abụ na ọ ga-abụ nkeji 10 kwa iri na abụọ nke, dịka ị pụrụ ịhụ, bụ naanị okpukpu abụọ ma ọ bụghị okpukpu atọ dịka ọ ga-eme na mgbake na-aga n'ihu na iri na abụọ.
Ọzọkwa: ebe ọ bụ na mkpụrụ ego Y, dị ka iwu ochie nke Parrondo paradox, na-egwu naanị ma ọ bụrụ na oge nzọ ego ahụ abụghị nkewa site na 3 (n'ọnọdụ a, n'eziokwu, a na-akpọ mkpụrụ ego Z), ọkachasị mgbe anyị dị na atụmanya, ọ ga - eme na ọdịiche dị mma nke mkpụrụ ego X / Z ga - eduga na - egbu oge nke na - abawanye nke nzọ ahụ, nke bụ eziokwu adịghị mkpa ma ọ bụrụ na anyị ejiri strok Y ma roi ka dịkwa n'usoro nke ihe mgbaru ọsọ + 5%.
In Roulette Paradox a na-akpaghị aka ya niile, tụọ ihe egosiri ebe egosiri ma pịa bọtịnụ ahụ ka ịdekọ nsonaazụ nke ogbugba (merie / furu efu).
Ihe omume a na-egosi ọrụ iji chekwaa data nnọkọ na eserese iji lelee ọganihu nke Real Bank (bọtịnụ dị n'elu aka nri).
Ọzọkwa, ọ bụrụhaala na roi% nke Real Cash bụ 5% ma ọ bụ karịa, bọtịnụ akwụkwọ ndụ (Target Roi) na ederede 5% na-enwu, nke a iji gosi anyị ka anyị 'nọrọ jụụ', n'ihi na bọtịnụ uhie (Next Bet on Mkpụrụ ego Y) ga - egosiputa ego ole anyị kwesịrị ịkụ nzọ na mkpụrụ ego Y (uru ọ ga - abawanye site na 2, ebe ọ bụ na n'eziokwu, anyị ga - akụ nzọ na iri na abụọ) ezigbo roi bụ 2%, onye na-amanye anyị ka anyị bulie nzọ ahụ? Naanị họrọ '7' na igbe edo edo Ntọala Bet ma wedata uru a chọrọ.
Cheta: sọftụwia ahụ 'na-atụ aro', mana mgbe enwere obi abụọ, anyị nweere onwe ikpebi dabere na ezigbo ọnọdụ nke ndekọ ego anyị.
Anyị abatala ugbu a na ajụjụ ndị a na-ajụkarị: mana uru gịnị ka usoro a na-ewetara onye ọkpụkpọ ahụ? Ego ole ka ọ na-ewe? Achọrọ m itinye Stopwin ma ọ bụ Stoploss na nnọkọ ndị a?
Ngbanwe a kọwara ebe a enweghị ike iweta onye ọkpụkpọ uru nke mgbakọ na mwepụ, n'ihi na atụmanya na ihe puru omume nke mmeri na ntụgharị ọ bụla agbanweghị, ihe a ga-enwerịrị nkwenye bụ nkesa diski, nke na usoro ihe a ga-eyi ezigbo ahụhụ atụ anya na ị ga-emeri Paradox (+ 10%).
N'oge a na-ede edemede a, egwuri m ihe dị ka puku abụọ puku abụọ (agba cha cha n'ịntanetị na ndị na-ere ahịa ndụ) na m ga-asịrịrị na m ahapụghị uru a tụrụ anya ya (2.000% ezigbo) ma ọ bụrụ na ọ bụghị ngbanwe niile dị na niile. .
Amaara m na ntụgharị 2.000 dị ole na ole, agbanyeghị, dịka ọnụọgụgụ na-ebu amụma, ahụrụ m 6/7 na-aga n'ihu na-efu na mkpụrụ ego Y, bụ nke nwere mgbake dị mma maka iri na abụọ ga-emepụta nnukwu ego, kama nke kachasị elu na Ekwesịrị m ime rue ugbua 2 nkeji iri na abụọ (ngụkọta 30 nkeji), usoro nke agbanyeghị ngwa ngwa laghachiri n'ihi na m na-echetara gị na mgbanwụ ọ bụla Y na-enweta na nkezi 60% nke oge ahụ.
Dabere na ule m, m ga - asị na ngalaba 400 dị mma.
Ọ bụrụ na, dịka anyị ga-anwa ịchọpụta, usoro a 'ga-eme ka ọdịiche ahụ dị nro' n'emeghị ka ọ bụ iwu iwu nke ikpe ahụ, isi obodo mbụ nke naanị 100 euro ga-ezu, nke kwekọrọ na nkeji 400 nke 0,25 cents.
Ọfọn, nke a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, o doro anya na ana m akwado ka ị na-eme ọtụtụ nnwale mgbe niile na ọtụtụ ezigbo ọnụnọ enwere ike ibudata na net tupu etinye otu pasent na kapeeti na-acha akwụkwọ ndụ (ezigbo ma ọ bụ nke mebere), ịnwale bụ n'efu na n'elu niile ọ na-enye gị ohere n'ezie nwalee ihe anyị nwere ike na-atụ anya n'oge ezigbo egwuregwu na usoro nke na-adịghị mma n'ụzọ na kacha nzọ, Ọzọkwa ọ dịghị ihe na-egbochi onye na-eche echiche nke ụfọdụ aghụghọ ka mma na-eguzogide nke a nhọrọ usoro itinye ọwọrọetop Ihe mgbagwoju anya nke Parrondo na roulette.
Nbudata Nbudata	RParadox.zip - 3 MB